Hlaing Mini Condo 1250 Sqft 1480 lakhs
1,480 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10179294 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇲🇲🏠 ရွှေတောင်ကြားမှာ မြေအဝယ်ရှာနေသော လူကြီးမင်းများအတွက် ဆိုဒ်အကျယ်၊ ဈေးတန်သော မြေကွက်လေး ရောင်းရန်ရှိသည်။ 🇲🇲🏠...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10154435 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09773221022, 09785221022, 09777720166, 09777720163, 09799559589
Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ပိတ်ရန်
ဗဟန်း မြို့နယ်၊အရှေ့မြို့ပတ်လမ်းပေါ်ရှိ ပေ(၂၀ x ၄၀) မြေညီ(ထပ်ခိုးပါ) တိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
830 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10162669 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဗဟန်း ရွှေတောင်ကြားတွင်ရှိသော RC(2)ထပ် လုံးချင်းအိမ်အရောင်း
18,000 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10050768 အတွက် Shwe Pyi Eain Real Estate service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
၂၄ နာရီအပြည့်အဝလုံခြုံမူ ကားပါကင်ပါ ဓာတ်လှေကားလေးနဲ့ အေးဆေး နေလိုသူများအတွက် ရတနာနှင်းဆီ ကွန်ဒိုအခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ရောင်းမည်။...
555 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10146747 အတွက် Shwe Pyi Eain Real Estate service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Shwe Moe Kaung Condo 2124 sqft
3,100 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10166277 အတွက် Myanmar Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Myanmar Land Real Estate ပိတ်ရန်
မြောက်ဒဂုံ #ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမကြီး(ဒဲ့ဆင်း) သံဇကာခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး (ပါမစ်မြေ ၁၃၅ ပေ x ၈၁ ပေ) မြေ(၂)ကွက်တွဲ #ညှိနှိုင်းဖြင့် ရောင်းပါမည်။...
4,600 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10181806 အတွက် Myanmar Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192324 အတွက် Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192300 အတွက် Perfect World Real Estate Services (Company) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
1,580 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192299 အတွက် Perfect World Real Estate Services (Company) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192298 အတွက် Perfect World Real Estate Services (Company) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192297 အတွက် Vibe Genius Property သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Vibe Genius Property ပိတ်ရန်
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192271 အတွက် Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာပ ၁၀ရပ်ကွက် သစ္စာလမ်းမကြီးနောက်ကျောရှိ 18' x 54'တိုက်ခန်းအရောင်း
570 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192248 အတွက် Myanmar Ray Real Estate Agency သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဗဟန်း ၊ အေးရိပ်သာကွန်ဒို ၊ 2000sqft ၊ 3300L
3,300 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192227 အတွက် စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192213 အတွက် Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(75’x85’)အကျယ်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ (River View Garden)တွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိ
7,300 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192193 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်